अग्नी परीक्षामा नव निर्वाचित जनप्रतिधिहरु « प्रशासन
अग्नी परीक्षामा नव निर्वाचित जनप्रतिधिहरु
गरमागरम बनेको चुनावी माहौल अझै सेलाएको छैन । नेता, कार्यकर्ता मात्रै हैन, राजनीतिप्रति चाँसो र चिन्ता बोक्ने जो कोही नेपालीहरुका लागि एक खालेको उत्सव नै बन्यो स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो चरण । जेठ ३१ हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन समयमै भयो भने यसको रौनकता केही दिन थपिने नै छ ।
करीब दुइ दशक पछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता हौसिनु स्वाभाविकै हो । अलोकतान्त्रिक तवरले संचालन गरिँदै आएका कतिपय कामहरुको चौतर्फि आलोचना हुँदै आएको छ । दलका नेताहरुबाट हुने गरेको यस्ता अलोकप्रिय कार्यहरुको जगजगीबाट मुक्ति पाई लोकतान्त्रिक परिपार्टिको बिकास हुन्छ कि भन्ने आम जनताको सोचाइ सत्य हो तर सहमति तथा सहकार्यका नाममा केही ठूला भनिएका दलहरुबाट गरिएको अप्राकृतिक साँठगाँठले बेला बेलामा जनतालाइ झस्काइ रहन्छ ।
सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो, बिगतका केही वर्षमा खासगरी माओबादी, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगाएत ज–जसको हातमा राज्यसत्ताको साँचो पर्यो उनिहरुले देश र जनता भन्दा पनि कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई फाइदा पुग्ने काम बढी गरे । र जे निर्णय गरे, त्यसलाई अकाट्य अर्थात कानून सरह नै बनाए । र, आजका दिनसम्म पनि चार/पाँच जना व्यक्तिहरुले जे चाह्यो त्यही हुँदै आएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लगै छ । यो बीचमा बिधि, विधान र बैधानिक प्रक्रियालाई यसरी लत्याएकी देख्नेलाई बढी लाज मान्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।
कर्मचारीमा इमान्दार र राम्राको आशा गर्दा झन् खत्तम भनेजस्तै ताजा र फ्रेसको नाममा महाभ्रष्ट र पुरानै शासकीय प्रवृतिको पुनरावलोकन नहोस् भन्नेतर्फ जनता अहिले देखि नै सजग रहन जरुरी छ ।
त्यस्तो कुनै क्षेत्र बाँकी रहेन, जहाँ यीनले चाहे, त्याहाँ जसरी पनि आफ्नो अनुकुल बनाउनको लागि कुनै कसर बाँकी राखेको होस् । भविश्यमा हुन सक्ने निर्णयको आसंकाको भरमा प्रधानन्यायाधिशमाथि नै महाअभियोग लगाउनेसम्मका कु चेष्टा गरे । र, सर्वत्र विरोध पछि दुम लुकाएर बसे । हुँदा हुँदा सत्ता समेत बाँडेर चलाउन थालेका छन् । नौ/नौ महिना पालै पालो । अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको पहिलो कार्यकाल खाइ सकेको माओबादीसत्ता सम्भवतः आज देखि सकिदै छ र पालो पर्खेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदको सपथका लागि तयारी गर्दैछन् । अबैध साँठगाँठको जुठो सिता टिप्न पुगेकासम्मलाई त यस्तो मिलीजुली प्रक्रिया ठिकै लाग्ला तर लोकतन्त्रमा यो सुहाउदैन । म्याद सकि सकेको औषधि जस्तै बनेका सिमित दलका सिमित व्यक्तिहरुले भागबण्डमा सरकार चलाउनु कुनै पनि अर्थमा सम्मानयोग्य हुनै सक्दैन र यो कदापी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्न सकिदैन ।
लामै प्रतिक्षा र धेरै तिकडम पछि स्थानीय तहमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रनिधिहरुको चयन भएको छ यद्यपी टिकट बाड्ने देखि उम्मेदवार बिजयी गराउनेसम्मका प्रक्रियामा तिनै म्यादसकिएका र जनताबाट अलोकपृय बनिसकेकाहरुको जुन हालीमुहाली रह्यो त्यसले कतै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पिछलग्गु नै त बनाउने हैन भन्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ । धेरै पछि जनप्रतिनिधी चुन्न पाएकोमा जनताहरु निकै खुसि छन् र विकासका लागि अत्यन्तै ठूलो अवसर पनि हो । यसलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले त्यसैगरी बुझिदियो भने त मुलुकले फड्को मार्नेमा दुइमत छैन तर नेताको हनुमान बने भने जनताले ठूलो धोका खानेपक्का छ ।
तपाइ हामीले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको कुरा हो । हालका अर्थात पुराना कर्मचारी घुस्याहा भए, कामै नलाग्ने भए र नयाँबाट मात्रै छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा सम्भव छ भन्नेहरुको ठूलै जमात छ । तपाइ हाम्रो रोजाइमा पनि युवा पुस्ताको बिकल्प छैन तर के युवापुस्ताले तपाइ हामीले सोचेको जस्तो काम गरेका छन् त ? एक चर्चित प्रशासनविद्संगको कुराकानीमा क्रममा नयाँ त झन् खत्तम भएर आए । पुरानो भन्दा झन् महाभ्रष्ट । त्यसो हुनुको एउटै कारण रहेछ नयाँ जो आए उनिहरुले जागिरमा प्रवेश नगर्दै ठूलो महत्वाकाँक्षि सपना बोकेर आए । जागिर खानुभन्दा अगाडि नै उनिहरु यो मानसिकता बनाएर प्रवेश गरे कि घोगन्ते बिद्याबाट पास भएका पुरानाले त यत्रो सम्पत्ति जोडे भने हामी त आधुनिक युगका सबै ज्ञान र प्रविधियुक्तले यिनीहरुभन्दा अब्बल छौं, किन धेरै कमाउन नसक्ने भन्ने भावनाले काम गर्यो र उनिहरु राष्ट, सेवा र जनहित भन्दा कसरी धन आर्जन गर्ने र सम्पन्न बन्ने भन्नमा मात्रै केन्द्रित बने ।
जो चुनीनु भएको छ तपाइहरु पूर्ण रुपमा नैतिकवान् भएर आउनुहोस् न कि अप्राकृतिक गठबन्धनको बैधानिक टिके ! भलै टिकट र सहयोग नेताले गरे होलान् तर चुनाव जिताएको जनताले नै हो ।
हो, यतिबेला नयाँ, फ्रेस र ताजा जनादेशबाट छानिएका नेतृत्वले गाउँ ठाउँको विकासका लागि सर्वोपरी भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने जुन सोच आम जनताको रहेको छ त्यसमा कर्मचारीकै हविगत नदोहोरियोस् भन्ने तर्फ सचेत रहन जरुरी छ । जनतालाई घुमाइफिराइ उही पैशा असुल्ने मात्र काम नहोस् । जसरी कर्मचारीलाई घुस्याहा बनाउनमा सिँगो समाजकै ठूलो हात रहँदै आएको छ त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि समाजका हरेक वर्गको उतिकै ठूलो हात रहन्छ । कर्मचारीमा इमान्दार र राम्राको आशा गर्दा झन् खत्तम भनेजस्तै फ्रेसको नाममा महाभ्रष्ट र पुरानै शासकीय प्रवृतिको पुनरावलोकन नहोस् भन्नेतर्फ जनता अहिले देखि नै सजग रहन जरुरी छ । र, जो चुनीनु भएको छ तपाइहरु पूर्ण रुपमा नैतिकवान् भएर आउनुहोस् न कि अप्राकृतिक गठबन्धनको बैधानिक टिके । भलै टिकट र सहयोग नेताले गरे होलान् तर चुनाव जिताएको जनताले नै हो ।
अन्तमा, कालो बादलका बीच पनि सेतो चाँदीको घेरा भए जस्तै चरम निरासा र अत्याचारका बीच पनि आशा र सदाचारीताको सम्भावना अझै बाँकी छ नै । जे जस्तो परिवेश र अवस्थाबाट आएको भएपनि आखिर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै चुनिएर आएका छौ । दशकौं पछिको जनताको आशालाई पक्कैपनि निरासामा बदल्ने छैनौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक । यही नयाँ प्रतिनिधिहरुलाई सुभकामना ।
Tags : राजनीति स्थानीय तह निर्वाचन